गहिरो निद्रा एक औषधि – erupse.com
गहिरो निद्रा एक औषधि
किन मान्छेको निद्रा विथोलिदैछ ? यसमा खराब जीवनशैली मूख्य कारण बनेको छ । केही समयअघि निद्राकै सम्बन्धमा एक सर्वेक्षण भएको थियो, जसअनुसार खासगरी यी पाँच कारणले निद्रा विथोलिने देखिन्छ । चिन्ता, तनाव (५४ प्रतिशत), पर्यावरण (४० प्रतिशत), कार्य वा विद्यालयको शेड्युल (३७ प्रतिशत), मनोरञ्जन (३६ प्रतिशत) र स्वास्थ्य कारण (३२ प्रतिशत) छ ।
निद्रा एक औषधि
शारीरिक स्वास्थ्य र तन्दुरुस्तीका लागि आवश्यक छ, पर्याप्त र गहिरो निद्रा । पोषिलो खाना, समुचित श्रम, नियमित व्यायाम, विश्राम जस्तै निद्रा पनि स्वस्थ्य जीवनकै एक अंश हो ।
निद्रा गहिरो हुनुपर्छ । पर्याप्त हुनुपर्छ । जब तपाईं गहिरो निद्रामा पर्नुहुन्छ, ब्युझँदा शरीर चंगा हुन्छ । बेग्लै किसिमको ताजापन अनुभव गर्नुहुन्छ ।
यद्यपी अहिले हामी बिहान उठ्नै सक्दैनौं । निद्रा खुलेपनि ज्यान तंग्रिदैन । उठ्दा पनि शरीर भारी हुन्छ । भद्दा हुन्छ । निद्रा नपुगे जस्तो हुन्छ । बिहान उठ्नसाथ हाइ काड्न थाल्छौं । फेरी ओछ्यानमै पल्टन मन लाग्छ । किन ?
किनभने हामीले पर्याप्त निद्रा लिन सकेकै छैनौ । सामान्यत हामीले ७ देखि ८ घण्टासम्मको निद्रा लिनुपर्छ । तर, समयले मात्र पुग्दैन । निद्रा गहिरो हुनुपर्छ । यदि गहिरो निद्रा लिइएन भने के हुन्छ ?
अनिद्रा एक रोग
तपाईंको शरीर बोझिलो हुन्छ । आलस्य बढ्छ । अनिद्राले गर्दा तपाईंको दैनिकी खलबलिन्छ । त्यती मात्र होइन, यसले तपाईंको शरीरको कार्य संचालनमा समस्या ल्याउँछ । तपाईं उच्च रक्तचाप, मधुमेह लगायतको रोगी हुनुहुन्छ ।
यदि गहिरो निद्रा लिन सक्नुभयो भने तपाईं तनावलगायत अनेकन समस्याबाट मुक्त रहनुहुनेछ । अहिले हामीमध्ये धेरै जनाको निद्रा खलबलिएको छ । हामी ओछ्यानमा त पल्टन्छौं, निद्रा लाग्दैन । शरीर थकित हुन्छ, तर निद्रा लाग्दैन ।
यताउता कोल्टे फेर्दाफेर्दै निदाउँछौं । निदाउँदा पनि हामी गहिरो निद्रामा पुग्दैनौं । बेलाबखत हाम्रो निद्रा विथोलिन्छ । अर्थात हामी राम्ररी निदाउन सक्दैनौ । किन यस्तो हुन्छ ?
किनभने हामी बेचैन छौं । हाम्रो मन स्थिर छैन । अनेक सोंच, विचार, रहर, सपना, आंकक्षाले मनमा उथलपुथल ल्याइरहन्छ । त्यस्तै ग्लानी, कुष्ठा, द्वेषले पनि हाम्रो मनमा आगो सल्काइदिन्छ । हामी शान्त रहनै सक्दैनौ । जबसम्म हामी शान्त रहन सक्दैनौं, निद्रा लाग्दैन ।
गहिरो निद्राका लागि
यसैले गहिरो निद्राका लागि पहिलो सर्त हो, मनमा शान्ति । मनलाई कसरी शान्त तुल्याउने त ? मन त चञ्चल छ । मन भोको छ, मन लोभी छ, मन इष्र्यालु छ । पर्याप्त धन दौलतले, सुख सुविधाले मन शान्त हुँदैन । मनलाई शान्त तुल्याउने भनेको आफुले आफैसँग चित्त बुझाउने हो । यसको सरल विधी चाहि योग, प्राणायाम, ध्यान हो ।
ध्यान विधीबाट हामी मनलाई शान्त तुल्याउन सक्छौं । आध्यात्मिक चेतले पनि मनलाई वशमा राख्न सकिन्छ । मनमा सकारात्मक भाव पैदा हुनुपर्छ । सकारात्मक, कृतज्ञ र प्रफुल्ल भएपछि मन स्थिर हुन्छ । मन स्थिर भएपछि हामी गहिरो निद्रामा पुग्न सक्छौं ।
यसैगरी समुचित श्रम पनि आवश्यक छ । हामी निस्क्रिय बस्छौं वा ऐश आरममा मात्र रुची राख्छौं भने पनि हामीलाई गहिरो निद्रा लाग्दैन । शरीर भनेकै समूचित श्रम गर्नका लागि हो । जब हामी श्रम गर्छौं, शरीरले विश्रामको खोजी गर्छ । त्यही बेला हामी गहिरो निद्रा पाउन सक्छौं ।
खानपानले समेत निद्रामा असर गर्छ । हामीलाई के लाग्छ भने मदिरापान गरेपछि निद्रा लाग्छ । तर, यसले क्षणिक निद्रा लागेपनि यो गहिरो हुँदैन । मदिरापान गर्नु पनि निद्रा विथोल्नु हो । त्यसैगरी धेरै मसेलेदार वा शरीरले सजिलै नपचाउने खानाले पनि निद्रा विथोलिन्छ ।
सात्विक खानपान, सकारात्मक सोंच, सरल जीवनशैली आवश्यक छ, गहिरो निद्राको लागि ।
१. गहिरो निद्रा पाउनका लागि मूख्यतः मानसिक रुपमा स्वस्थ्य हुनु आवश्यक छ । सुत्नुअघि मनमा कुरा खेलाउने, चिन्ता लिने जस्ता काम गर्नु हुँदैन ।
२. सुतेको बेला आयव्यायको हिसाब लगाउने, पारिवारिक समस्यामा घोत्लिने, नकारात्मक बिचारहरु ल्याउने जस्ता कुराले पनि निद्रा विथोलिन्छ । त्यसैले सुत्नुअघि यस्ता विकारयुक्त विचारहरु मनमा ल्याउन हुँदैन ।
३. सुत्नुअघि त्यस्ता कुराहरु सोच्नु हुँदैन, जसले मनलाई दुखित तुल्याउँछ । अक्सर मानिस ओछ्यानमा पल्टिएर मनमा अनेक कुरा खेलाउन थाल्छन्, विगतका गल्तीहरु सम्झन्छन्, भविष्यका बारेमा कल्पन्छन् । यसले पनि निन्द्रा विथोल्छ । यस्ता कुराहरु सोचेर केहि फाइदा छैन । दिनमा शरीर सक्रिय भएको बेला यस्तो काम गर्नुपर्छ, जसले आफुलाई सन्तुष्ट तुल्याउँछ ।
४. सुत्नुअघि मनलाई स्थिर, खुसी र सन्तुष्ट राख्नुपर्छ । भविष्यको कुरा सोचेर वा विगतका गल्तीहरुमा पछुतो गरेर केहि उपलव्धी छैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।
५. सुत्नुअघि धेरै खानेकुरा खानु ठीक होइन । यसले पेट भद्दा हुन्छ र राम्ररी निन्द्रा लाग्दैन । अधिक पानी वा झोलयुक्त पदार्थ सेवन गर्दा पनि पिसाब लाग्छ, जसले निद्रा विथोलिदिन्छ । सुत्नुअघि हल्का एवं सुपाच्य खानेकुरा सेवन गर्नुपर्छ ।
६. सुत्ने र उठ्ने समय तालिका नियमित हुनुपर्छ । निश्चित समय तालिकामा सुत्ने अभ्यास गरिएको छ भने त्यही समयमा निद्रा लाग्छ ।
७. शारीरिक रुपमा निस्क्रिय हुँदा पनि राम्ररी निद्रा लाग्दैन । त्यसैले दिनमा शारीरिक रुपमा सक्रिय रहनुपर्छ । त्यस्तै व्यायाम गर्नुपर्छ, हिँडडुल गर्नुपर्छ, सानोतिनो घरायसी काम गर्नुपर्छ ।
८. सुत्नुअघि हल्का खानेकुरा सेवन गर्ने, केहि क्षण हिँडडुल गर्ने, हल्का व्यायाम गर्ने, प्रणायाम गर्ने, ध्यान गर्ने जस्ता सिलसिलाबद्ध क्रियाले पनि गहिरो निद्रा लाग्छ ।
९. ओछ्यान सजिलो हुनुपर्छ । साथै सुत्ने कोठाको वातावरण प्रतिकुल हुनुहुँदैन । राती चर्को ध्वनी आउने, हल्लीखल्ली हुने जस्ता कुराले पनि निद्रा विथोलिन्छ ।
१०. सुत्नुअघि चाखलाग्दो पुस्तक पढ्नुहोस् । मधुरो संगीत सुन्नुहोस् । यसले ध्यान अन्यत्र भंग हुँदैन र निद्रा लाग्छ ।
केहि घरेलु विधी
राम्रो निद्रा पाउनका लागि केहि घरेलु औषधीले पनि उपयोगी हुन्छ । तर, पूर्ण रुपमा यसमै निर्भर हुनुहुदैन । स्वस्थ्य दिनचर्यासँगै घरेलु विधी अपनाएपछि गहिरो निद्रा पाउन सकिन्छ ।
-काचो प्याजको सेवन गर्नुपर्छ ।
– पुदिनाको पात पानीमा उमालेर उक्त पानी सेवन गर्नुपर्छ ।
-सुत्नुअघि मनतातो दुध पिउनुपर्छ ।
शनिबार, जेष्ठ १७, २०७७ मा प्रकाशित
कोरोना भाइरसको जिनमा भएको परिवर्तन तथा यसका जोखिमहरु
अब निजी ल्याबले पनि कोरोना परीक्षण गर्ने, खर्च सरकारले व्यहोर्ने
कँडेलको पहलमा बेनी अस्पताललाई छ सय आरडिटि किट
भारतीय सञ्चारमाध्यमको प्रचार पीत पत्रकारिताको नमूना : पत्रकार महासंघ
भारतको टेलिभिजन च्यानल जी टिभीले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनिया राजदूत होउ यान्छीमाथि बनाएको रिपोर्टमाथि नेपाल..
‘भारतीय मिडियाको अनर्गल प्रचारले सीमा नाघ्यो’
प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनसहित बेनी र मुस्ताङमा प्रर्दशन
बिहीबारदेखि बाढीपहिराको जोखिमः सतर्कता अपनाउन आग्रह
चीन र भुटान सीमा विवाद : भारतलाई दबाव दिने रणनीति ?
आन्तरिक विवादमा बाह्य खेल
नेकपाको कलह देखेर भड्कियो सलह !
८ नेपाली एलजिबिटिआई सेलिब्रेटी, जसले विश्वभर फैलाए आफ्नाे पहिचान
Mobile : 9805123000
Mobile : 9801130472
४५ जनालाई संक्रामक रोग ऐन २०२० बमोजिम कारबाही July 9, 2020
लोगेकर गुम्बाको पर्खाल निर्माणको अनुगमन July 9, 2020
बार्सिलोनाले उपाधिको आशा कायमै राख्दा, एस्पानियोल रेलिगेसनमा July 9, 2020
भारतीय सञ्चारमाध्यमको प्रचार पीत पत्रकारिताको नमूना : पत्रकार महासंघ July 9, 2020
‘भारतीय मिडियाको अनर्गल प्रचारले सीमा नाघ्यो’ July 9, 2020
प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनसहित बेनी र मुस्ताङमा प्रर्दशन July 8, 2020
बिहीबारदेखि बाढीपहिराको जोखिमः सतर्कता अपनाउन आग्रह July 7, 2020
प्राथमिक बजारमा लगानीको अवसर, धमाधम आउँदैछन् आईपीओ July 7, 2020
चीन र भुटान सीमा विवाद : भारतलाई दबाव दिने रणनीति ? July 7, 2020
आईपीएल आयोजना गर्न न्युजिल्याण्ड इच्छुक July 6, 2020
मेलम्ची खानेपानीको सुरुङमा परीक्षणका लागि पानी हालियो July 5, 2020
आन्तरिक विवादमा बाह्य खेल July 5, 2020
नेकपाको कलह देखेर भड्कियो सलह ! July 4, 2020
म्याग्दीका ५ जना संक्रमण मुक्त भए सँगै निको हुनेको संख्या ११ पुग्यो July 4, 2020
कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा स्थानीयको अवरोध July 4, 2020
© २००६-२०१९ erupse.com सर्वाधिकार सुरक्षित, Design By: Hari Karki